Wanta filatame marsi.
Wanta fili akkasumas sajoo Marsuu Kamshaa Fakkaasaa irraa cuqaasi. Wanta fili akkasumas sajoo kamshaa fakkaasa irraa cuqaasi. Wanta fili akkasumas sajoo Marsuu Kamshaa Amaloota Fakkaasa Wantaa irraa cuqaasi. Moggaa too'annoo wantaa kallattii barbaaddetti marsutti harkisi.
Dhangii - Sadarkaa fi Hammamtaa - Marsuu.
Title is: Marsuu